Homeसमाचारहरिहर अधिकारीको खुलासा नितासँग विवाह ग’र्दिन, स्वस्तिमा मन पर्छ (भिडियो हे’र्नुहोस्)
April 12, 2021 admin समाचार 2127
नायीका नीता ढुंगाना र ज्योतिष हरिहर अधिकारीको प्रेमको चर्चा अहिले वजा’रमा छ । तर उनीहरुले यो कुरालाई स्वी’कार गरेका छैनन् । उनीहरु एउटै प्रोजेक्टमा काम गर्दै आएका छन् । पत्रकार ऋषी धमलाले ज्योतिष हरिहरलाई का’र्यक्रममा बोलाएर उनलाई ख्यार ख्यार पारेका छन् । ऋषीले कार्य’क्रममा केवल हरिहरसंग नीतासंगको प्रेमको कुरा मात्र सोधिरहन्छन् । तर हरिहरले त्यो कुरालाई इन्का’र गरिरहन्छन् । हरिहरले आफ्नो कुनै’वेला एक जना युवतीसंग प्रेम रहेको तर नीताको बारेमा अहिले केही भन्न न’सक्ने बताए ।
हरिहरलाई नीतासं’ग संगै बसेको भनेर आरोप लगाउँदा ऋषीलाई प्रमाण ल्याउन उनले चेतावनी दिए । हरिहर’लाई पहिलो प्रेम असफल भएको र अब दोस्रो प्रेम स’फल हुन्छ की हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न सुन्दा अरुलाई पनि अलि अप्ठेरो लाग्ने खा’लको थियो । उनले पहिलो युवतीलाई प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए । केही महिना प्रयोग गर्नुभयो अनि छोडि’दिनुभयो ?
भनेर प्रश्न गरे । ने’पाली फिल्म क्षेत्र गसिपका एउटा राम्रो वजार हो । कला क्षेत्रमा रहेकाहरुका बारेमा विभिन्न किसि’मका गसिप बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी हुने भनेको कलाकारको प्रेम र सम्बन्धका बारेमा हो । कलाकारको ब्यक्ति’गत जिवनका बारेमा सर्वसाधारणलाई धेरै चासो हुन्छ । त्यसैले पनि यस्तो गसिप धेरै चर्ची’त हुन्छन् । अनेक अड्कलवाजी गरिएका गसि’प चल्ने गरेका छन् ।
यस्तै अड्कल’वाजीका कुराहरुलाई ऋषीले हरिहरसंग ख्यार ख्यार पार्दै सोधे । हरिहरले पहिलो प्रेम ४ वर्ष चलेको ब’ताए । उनले सम्बन्ध विच्छेद पनि सम’झदारीमा भएको बताए । हप्तै पिच्छे आउने यस्तो गसिप कति सत्य हुन्छ त कति हल्ला मात्र हुन्छ । ुफुलै फुलको मौसम तिमीलाईु को सुटिगंको समयमा चार वर्ष अघि अर्कै नाय’कसंगको प्रेममा रहेको भनेर चर्चा गरिए’की नायीका निता ढुंगानाको प्रेमको फेरी चर्चा हुन थालेको छ । अहिले उनको प्रेमको चर्चा चर्चीत ज्यातीष हरिहर अधिकारीका साथमा रहेको ग’सिप सुरु भएको छ । हरिरह ना’यक पनि हुन् । इताजा खबरबाट
October 12, 2020 admin समाचार 7514
गायक दा’वा गुरुङ र गायि’का वानिका प्रधान’को स्व’रमा रहेको ‘हिजो जस्तो लाग्छ’ बोल’को म्युजिक भिडि’यो सार्व’जनिक भएको छ। गीतमा शब्द , संगीत स्वयम् गायक दावा गुरुङको रहेको छ। यस गीतलाई रोमी बस्नेत’ले संगीत सं’योजन गरेका
October 29, 2020 admin समाचार 6498
June 14, 2021 admin समाचार 1968
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205264)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196645)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196146)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (195997)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194438)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194135)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192368)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191953)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184776)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161452)